श्रीमान् बिदेशमा, छिमेकीले गरे अनैतिक कार्य, उजुरी दिन गएका आफन्तलाई प्रहरीले उल्टै थु’न्यो! भिडियो सहि - हिपमत
श्रीमान् बिदेशमा, छिमेकीले गरे अनैतिक कार्य, उजुरी दिन गएका आफन्तलाई प्रहरीले उल्टै थु’न्यो! भिडियो सहि
मध्यरातमा एक महिलालाई छिमेकीले अनैतिक कार्य गर्छन् । पी’डित महिलाले हल्ला गरेपछि आफन्तले आरो’पितलाई पक्रेर प्रहरीको जिम्मा लगाउँछन् । तर प्रहरीले उल्टै पी’डित महिलाका आफन्तलाई थु’नेपछि पी’डित महिला मिडियामा आएकी छिन् ।
यो घटना सुनसरीको हो । जिल्लाको बर्जु गाउँपालिका ६ स्थित चिमडीमा साउन १७ गते राती घरमा पसेर स्थानिय सञ्जय मोची (चमार)ले अनैतिक कार्य गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो । उजुरी दिने पी’डितको आफन्तलाई इलका प्रहरी कार्यालय दुहवीले अभ’द्र मु’द्दा चला’एपछि महिला मिडियामा आएकी हुन् ।
महिलाको श्रीमानको भिनाजु निरज चौधरीलाई प्रहरीले निय’न्त्र’णमा लिएर मु’द्दा चलाएको स्थानीय अगुवा मन्जु सरदारले जानकारी दिइन् । अनैतिक कार्यको उजुरी दिन जाँदा पी’डितको प्रहरीले उजुरी लिएको थिएन ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
महिलाका श्रीमान् रोजगारीको लागि मलेसिया गएका छन् । स्थानीय सञ्जय मोचीले महिलाको घरको ढोका तो’डेर गरेको आरोप छ । यसबारे प्रहरीमा उजुरी दिदाँ उल्टै प्रहरीले ध’म्का’उने गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
‘साझमा खाना खाएपछि सु’ते’का थियौ,’ पीडित महिलाले एक पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, ‘मध्य राती सञ्जयले बाँसको ढोका हटाएर घर भित्र पसेर मुख थुनेर अनैतिक काम गर्यो ।’
आफुले धके’लेर हल्ला गरेपछि घरमा रहेको सासु र ससुरासहित भिनाजुले सञ्जयलाई समा’तेको उनले बताइन् । मध्यरातमा घरमा पसेर अनैतिक कार्य गर्नेलाई आफन्तको सहयोगमा समातेपछि सञ्जयको आफन्तले पी’डित परिवार माथी उल्टै आ’क्रम’णसमेत गरेको थियो । महिलाको सासुको हातमा धा रि लो ह ति या रले का टे को छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयमा मार्फत ज व र ज स्तीमा जाहे’री दर्ता भएपछि बल’त्का’र भएको ७ दिनपछि मात्र प्रहरीले मेडिकल गराएको छ । यता इलाका प्रहरी कार्यालय दुहवीका प्रहरी निरिक्षक घनेन्द्र खजुमले उजुरी दिन आएकी महिलाको वयानको अधारमा अभद्र मु द्दा दर्ता गरेको बताए । अर्को जाहे’री लिएर आउन भन्दा नआएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएको उनको भनाई थियो ।
करेन्ट लागेर रिताको मृत्यु